कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकसहित ५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट | आर्थिक अभियान
कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकसहित ५ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट
मंसिर १६, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोवार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक ४९ दशमलव शून्य ४ अंकले घटेको छ ।
बजार घटेसँगै कारोवारमा आएका २३१ ओटा कम्पनीमध्ये पाँच ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक, मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनी, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स,युनाइटेड इदी मार्दी हाइड्रोपावर र गुडवील फाइनान्सको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको हो ।
ती पाँच ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन ६ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ ।
कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ९१३ दशमलव ४० मा झरेको हो । त्यसैगरी मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ७५ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको ५ दशमलव ५७ प्रतिशत, युनाइटेड इदी मार्दीको ५ दशमलव ४१ प्रतिशत र गुडवील फाइनान्सको शेयरमूल्य ५ दशमलव ३९ प्रतिशतले घटेको छ ।
बजार घट्न थालेसँगै ती कम्पनीको शेयरमा खरीदकर्ताभन्दा विक्रेता हाबी हुँदा शेयरमूल्य घटेको हो । यो दिन मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५२५, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको रू. ४९२, युनाइटेड इदी मार्दीको रू.५६० र गुडवील फाइनान्सको शेयरमूल्य रू. ७२० कायम भएको छ ।
सिभिल बैंकसहित ५ ओटा धितोपत्रमा उच्च खरीद माग [२०७८ माघ, २]
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको सर्वाधिक रू. १६ करोड ६० लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री [२०७८ माघ, २]